Photo Paper, Medical Film, Solar Backsheets - iBaoding Lekai International Ltd.
NgoDisemba 24, 1953, umhlangano kahulumeni wama-199 woMkhandlu Wombuso wenza “Isinqumo ngokusungulwa kwenethiwekhi yokuqagela ifilimu nemboni yamafilimu” futhi yanquma ukwakha ifektri yamafilimu eChina.
NgoJulayi 1, 1958, kwaqagelwa phansi idolobha iBaoding, esifundazweni saseHebei. Igama lenkampani yokuqala, iBaoding Filmstrip Factory, lanikwa amandla.
Amakhemikhali Wezithombe We-Mini-Lab
Ngokuya ngezidingo zakho, yenza ngezifiso kuwe, futhi ikunikeze ubuhlakani
Ngokuthuthuka komphakathi, abantu banamathela ngokubaluleka kwezempilo. Ukuphepha kokudla kuyinto esemqoka ethinta impilo yabantu ebilokhu ithathwa njengento enkulu ngabakhiqizi bokudla bakwamanye amazwe kanye nokuqondiswa kokuqapha ...
092021 / Januwari